February 5, 2021 - Padaethar
မေအာ္ပါနဲ႔.. ခံစားလြယ္တာ မိန္းကေလး ေတြပါ
February 5, 2021 by Padaethar
မအော်ပါနဲ့.. ခံစားလွယ်တာ မိန်းကလေး တွေပါ ချစ်သူ တွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ်ချစ်သူ ကောင်မလေး ကို တကယ်ချစ်မှ အောက်ကစာတွေ ဆက်ဖတ်ပါ မအော်ပါနဲ့.. ခံစားလွယ်တာ မိန်းကလေး တွေပါ ချစ်သူ တွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ် ဘာအကြောင်းရှိရှိ မအော်ပါနဲ့ စကားနဲ့ပဲပြောပါ သူတို့ပဲအော်ပါစေ… လက်မပါနဲ့.. မိဘ တွေကတောင် မရိုက်ရက်တဲ့နုနယ်တဲ့ မိန်းကလေး ပါ ရိုက်ဖို့နေနေသာသာ အော်တာတောင်လွန်လှပီ သူ့ မိဘ ထက် မင်းကပိုကောင်းအောင်ထားနိုင်ရင်တောင် လက်ပါဖို အခွင့်အရေးမ ရှိဖူး 😪 ( ခုတလော မိန်းကလေး တွေကပဲလက်ပါနေသလိုပဲ ) အလိုလိုက်ပါ. အလျှော့ပေး ပါ. သည်းခံပါ.. သူမကိုအလျှော့ပေးတာက ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့သဘောပါပဲချစ်သူဘဝမှာတောင်အလျှော့မပေးနိုင်ရင် လက်ထပ် ပီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ငါ့ ချစ်သူ က ငါ့ကိုဘယ်လောက်အလျှော့ပေးတယ် … Read more
တစ်ဖက်အမျိုးသားက သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက် (၅) ချက်
တစ်ဖက်အမျိုးသားက သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက် (၅) ချက် သိမ်းငယ်စိတ်ဆိုတာမျိုးက တစ်ဖက်လူအနေနဲ့ ကိုယ့်ထက်သာနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲသိနေပြီးတော့ ဒါကို မနာလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမလိုအားမရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံလာခဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုပါ။ အကယ်၍ အမျိုးသားတစ်ယောက်က သင့်ရှေ့မှာ သိမ်ငယ်မိနေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုအပြုအမူတွေလုပ်တတ်သလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား။ (၁) မျက်လုံးချင်းမဆုံရဲဘူး အိုးမလုံအုံပွင့်ပြီးတော့ သင်နဲ့သူ ဘယ်တော့မှ မျက်လုံးချင်းဆုံရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အရှိန်အဝါတွေအောက်မှာ ကောင်းကောင်းမရှင်သန်နိင်ကြဘူးလေ။ (၂) မနာလိုဘူး လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို မနာလိုလား၊ လိုလားဆိုတာ သူတို့ရဲ့စကားအပြောဆိုတွေနဲ့ အပြုမူတွေကနေတစ်ဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတစ်ယောက် သင့်ကို မနာလိုဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သူတို့ထက် အဆပါင်းများစွာ သာနေလို့ပါပဲ။ (၃) စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ် ချွေးစေးတွေထွက်နေပြီး စကားတွေကလည်းမြန်၊ တောင်စဉ်ရေမရနဲ့ မရယ်ရတဲ့ဟသတွေပြောနေပြီဆိုရင် သူတို့သိမ်ငယ်နေတယ်ဆိုတာကို သင်မရိပ်မိအောင်လို့ … Read more
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်လို့ သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ … တစ်ခါတရံမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ကိုယ့်ကို လိမ်နေတယ်၊ အဲဒါကိုလည်း ကိုယ်က သိနေတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ရောက်နေတယ်ဆိုရင် စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကို ခံစားနေရမှာ သေချာပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်ရက်လေခြင်း၊ ကိုယ့်ကို လိမ်ရက်လေခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပွားများအောင် တွေးတောမနေဘဲ ဒါလေးတွေကို သတိရဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ (၁) လိမ်တဲ့သူက ကိုယ်ခံစားရတာထက် ပိုပြီး ခံစားရမယ်ဆိုတာ သတိရပါ မကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တဲ့ သူဟာ တချိန်ချိန်မှာ ဝဋ်ပြန်လည်မှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့သလိုမျိုး သူလည်း တစ်ချိန်ချိန်ပြန်ကြုံရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို လိမ်တဲ့သူကို ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းခံ … Read more
ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ ဒီစကား (၅) ခွန်းကို ကောင်လေးတွေက စိတ်အပျက်ဆုံးပါပဲ ဒိတ်လုပ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိပြီးတော့ ရင်းနှီးလာအောင် တွေ့ကြတာမလား။ ဒီလို ဒိတ်နေရင်းမှာပဲ ရုတ်တရက် သူ့ဖက်က သင့်ကို စိမ်းသွားတာမျိုး၊ နောက်ထပ် ထပ်ပြီးမတွေ့ချင်အောင် ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ဟာ ဒိတ်နေတုန်း သူ့ကို ဒီလိုစကားတွေ ပြောခဲ့လို့ပါတဲ့။ စကားတွေကတော့.. အလုပ်အကြောင်းအရမ်းညီးတာ သူလည်းမသိ၊ သူနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ အလုပ်အကြောင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကြောင်းတွေကို အတင်းပြောလိုက်၊ စိတ်ပျက်စရာကိစ္စတွေကိုပြောလိုက်နဲ့ ငြီးနေမယ်ဆိုရင် သူ့ခင်ဗျာ အစကတော့ ရေလိုက်ငါးလိုက် လိုက်ပြောနိုင်ပေမယ့်လို့ ကြာလာတဲ့အခါ အရမ်းပျင်းဖို့ကောင်းပြီး စိတ်ပျက်လာပါလိမ့်မယ်။ တခြားလူတွေရဲ့ relationship အကြောင်းတွေ ဘယ်သူ့ကောင်လေးကတော့ ဘယ်လို surprise တွေလုပ်တာ၊ ဘယ်လိုချစ်ပေးတာကစလို့ ဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာအဆုံး သင်တို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ တခြားလူနှစ်ယောက်ရဲ့ … Read more
သင့္ေကာင္ေလးဟာ သင္ထင္တာထက္ပိုၿပီး နက္ရႈိင္းစြာခ်စ္မိေနမွန္း သိႏိုင္မယ့္လကၡဏာ (၅) မ်ိဳး..
သင့်ကောင်လေးဟာ သင်ထင်တာထက်ပိုပြီး နက်ရှိုင်းစွာချစ်မိနေမှန်း သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာ (၅) မျိုး.. ယောကျ်ားလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြလေ့မရှိကြပါဘူး။ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ထင်ဟပ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သင့်ကောင်လေးက သင့်ကို စကားချိုချိုတွေ၊ စကားလုံးလှလှလေးတွေ မပြောလို့ သင့်ကိုမချစ်ဘူးလို့ သင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခုဖော်ပြပေးမယ့် အချက်လေးတွေကို လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ထင်ထားတာထက်ကို သင့်ကိုပိုပြီး နက်ရှိုင်းစွာချစ်နေတဲ့သူဆိုတာ သေချာပါတယ်။ (၁) သူ့ရဲ့အပြုအမူလေးတွေက ဖော်ပြနေမယ် သင့်ကို ငေးကြည့်နေတာမျိုး၊ ဆံပင်လေးကို သပ်ပေးတာမျိုးလေးတွေ၊ ရေဘူးအဖုံးကို အလိုက်တသိ ဖွင်ေ့ပးတာမျိုး၊ ပူတဲ့အချိန် ယပ်ခပ်ပေးတာမျိုးလေးတွေက သင့်ကိုသူ တကယ်မြတ်နိုးတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ အပြုအမူလေးတွေပါ။ တစ်ခါတလေ အမှတ်မထင် ပွေ့ဖက်လိုက်တာမျိုးလေးတွေ၊ ကလေးတစ်ယောက်လို သင့်ကို ပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်နေတာမျိုးလေးတွေက … Read more
အသည်းကွဲနေတဲ့ခံစားချက်ကြီးကို လုံးဝမေ့ပျောက်သွားစေမယ့်နည်းလမ်း(၅)မျိုး လောကမှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ်ပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်ရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ အချစ်ရေးတစ်ခု အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာ ပိုချစ်တဲ့သူက ပိုနာကျင်ရစမြဲပါပဲ။ ကိုယ့်ဖက်က ဘယ်လောက်ပဲချစ်ခဲ့၊ ပေးဆပ်ခဲ့ပါစေ ကိုယ်အသည်းကိုခွဲပြီး၊ ကိုယ့်အပေါ်ကို ရက်စက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်း ကြုံရမှာပါ။ ဒီလိုကြုံလာရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ဖို့၊ ကိုယ့်ဘဝကိုအနစ်မွန်းခံဖို့ထက်စာရင် သူ့ကိုဘဝထဲကထုတ်လိုက်တာ ပိုပြီးမှန်ကန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရက်စက်သွားတဲ့သူကို အပြီးအပိုင်မေ့ဖျောက်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သူ့အကြောင်းမတွေးပါနဲ့တော့ မိုးလင်းလို့ မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သင့်ဘယ်ဘယ်ရင်အုံကို စူးခနဲဖြစ်စေတဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေ၊ သူ့အကြောင်းတွေကို အခုကစပြီး မတွေးပါနဲ့တော့။ သူ့အကြောင်းကိုတွေးနေမယ့်အစား တစ်ခုခုမှာ အာရုံကိုလွှဲထားလိုက်ပါ။ သူ့အကြောင်းဝင်လာတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ တခြားအကြောင်းနဲ့အာရုံလွှဲတဲ့အလေ့အကျင့်ကို လုပ်ပါ။ ကြာလာတဲ့အခါ သူ့အကြောင်းတွေးဖု့ိတောင် သင်သတိရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ (၂) သူ့အကြောင်းမသိချင်ပါနဲ့ သူငါ့ကို လွမ်းနေမလား၊ သူခံစားနေရမလား၊ သူလည်းငါ့ကိုလွမ်းရဲ့လား၊ အချစ်သစ်များရနေပြီလား အဲလိုမျိုး … Read more
ဆရာမ စာေမးတဲ့အခ်ိန္ အာသာေျဖမိလို႕ အဆူအေငါက္ခံလိုက္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးရဲ႕အျဖစ္
ဆရာမ စာေမးတဲ့အခ်ိန္ အာသာေျဖမိလို႕ အဆူအေငါက္ခံလိုက္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးရဲ႕အျဖစ္ စာသင္ခန္းထဲမွာ အာသာေျဖမိလို႕ ဆရာမရဲ႕ အဆူအေငါက္ခံလိုက္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးရဲ႕အျဖစ္ နင္ဘာလို႔ အာသာေျဖတာလဲ? ေဒါသထြက္ေနတဲ့မ်က္လုံးရဲရဲေတာက္နဲ႔စိုက္ၾကည့္ၿပီးေမးတဲ့ဆရာမရဲ့ေမးခြန္းကိုကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုေျဖရမွာလဲ။ အတန္းဆင္းသြားလို႔ ဆရာမရဲ့က်ဴရွင္ခန္းေလးထဲမွာကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဆရာမနဲ႔ႏွစ္ေယာက္သာရွိေတာ့သည္။ ဆရာမဆိုသည္မွာလည္းအသက္ႀကီးႀကီးမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္အလြန္ဆုံးႀကီးမွ ငါးႏွစ္ခန္႔သာျဖစ္မည္။ ဆရာမကေတာ္ေတာ္ငယ္ပါေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ေခ်ာလည္းေခ်ာသည္။ အညာသူပီပီအသားညိဳစိမ့္စိမ့္ႏွင့္အေတာ္ၾကည့္ေကာင္းသည္။ အရပ္အတန္အသင့္ရွည္၍ေတာင့္သည္။ အသက္ငယ္ေသာ္လည္းစကားေျပာျပတ္သည္။ အခုလည္းကၽြန္ေတာ္အာသာေျဖတာကိုသိသြားေသာေၾကာင့္အလြန္အမင္းေဒါသထြက္ေနေလသည္။ “မင္းကိုေအးၿပီးစာေတာ္တဲ့ကေလးလို႔ထင္ထားတာ အခုလုပ္ပုံကိုၾကည့္ဦး အာသာေျဖတာမွန္လားမွားလားေျပာစမ္း” ဆရာမအသံမွာေတာ္ေတာ္ပင္မာေက်ာေနသည္။ ေဒါသထြက္ေသာစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ထင္သည္။ခႏၶာကိုယ္ကေလးမွာလည္းတဆတ္ဆတ္တုန္ေနေလသည္။ “မွား မွားပါတယ္ဆရာမ” “ကဲေျပာစမ္းပါဦး ဘာလို႔အာသာေျဖရတာလဲ” ကၽြန္ေတာ္မေျဖနိုင္ပါ။ ဘာေျဖရမလဲမသိပါ။ ဆရာမကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ၿပီးသက္ျပင္းခ်လိုက္သည္။ အမူအရာမွာေစာေစာကေလာက္မခက္ထန္ေတာ့ပဲ ေျပေလ်ာ့သြားဟန္တူသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုစိုက္ၾကည့္ၿပီး…. “ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ခြင့္လႊတ္လိုက္မယ္ ” အခုမွရင္ထဲကအလုံးႀကီးက်သြားေတာ့သည္။ “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာမ ေနာက္တစ္ခါဒီလိုအမွားမ်ိဳးထပ္မလုပ္ေတာ့ပါဘူးဆရာမ” ဆရာမက မ်က္လုံးရြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ကၽြန္ေတာ့္ကိုစိုက္ၾကည့္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ကၽြန္ေတာ့္ပုခုံးကိုကိုင္ၿပီး “ကဲပါ မင္းကကေလးဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့မွားမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ေသခ်ာေတာ့မွတ္ထားေနာ္၊ ဝါတာလူးစစ္ပြဲမွာစစ္ရႈံးသြားတာဘယ္သူလဲလို႔ေမးရင္ နပိုလီယန္လို႔ေျဖရမွာေနာ္ အာသာေျဖရမွာမဟုတ္ဘူး” ဤသည္မွာကၽြန္ေတာ့္သမိုင္းဆရာမေလးမွ … Read more